Ha dhayalsan - Hoyga Aqoonta
Nambarka Xubinka : 994
Taariikhduu xubinku is qoray golaha: Jan 2014
Wadanka : Yurub oo lagu ba,ay
ka qayb galka: 38
Waxaa la qoray : [ 15-03-2014 ]
Iga hanta sheekadan cusub een idiin xanbaarsanahay.
Goobtu waa timo jare ku yaalla carriga ingiriiska iyo Landhan.
Tima jaruhu waa cusubyahay oo dhawaanahan ayaa la furay.
Waxaa ka howl gala wiil isagu degey dalkan una dhashay dalka Yemen oo uga soo
baxay dugsiga sare xirfadda tima jarista.
Badanaa macaamiishiisu waa dadka uu aqoonta u leeyahay iyo deriska oo markaa
uu u bandhigay si'ay uga jartaan intuu suuq ka yeelanayo.
Isagoo maalin maalmaha ka mida howshiisii siday tahay u gudanaya oo howl ku guda jira
ayaa islaan waayeel ahi soo gashay. Markay indha indhaysayna kuraasta bannaan ayay
dhinac ka degtay si markuu howsha dhammaysto ula hadasho iyadoo aragtay inaysan cid
kale joogin. Wuxuu howshiisii wato wuxuu u noqday firaaqo markaana weydiiyey waxa uu
u qaban karo.
Markaasay inta istaagtay "Waxa kale kuuma sugayn ee waxaan rabaa inaad qoraalkan hagaajiso".
Isagoo yaabban ayuu weydiyey "Qoraalkee?".
"Muraayaddaada qoraalka ku qoran!".
Iyadoo farta ugu fiiqaysa muraayadda dukaanka.
"Maxaa dhacay?" Ayay ahayd su'aashii ugu xigtay ee afkiisa ka soo baxday isagoo yaabban.
Waxay ugu jawaabtay waxaa muraayadda kuugu qoran "Barbar shop marka eraygu wuu qaldanyahaye sax".
Inta dhinac uga dhaqaaqay ayuu qoraalkii dib ugu noqday wax qaladana kuma arag, markaasuu inta ku
soo jeestay weydiiyey "Maxaa qaldan sax baan u'arkaaye?".
Markaasay ugu jawaabtay "Barbar sidaa looma qoro ee waa Barber".
Inta dhoolla caddeeyey buu haddana weydiiyey "Maxaa dhiba oo ku jira waa "A iyo E'e"?".
Intaa markay afkiisa ka soo baxday ayay is beddeshay oo wejigeedu xanaaq ka muuqday oo ku
tiri "Haddaad beddeli weydo waan ku dacwayn oo maxkamad baan kula koriye la soco!".
"Ma'intaasaad igu dacwayn?" Ayuu weydiiyey isaga oo yaabban.
"Oo sabab?". ayuu haddana weydiiyey isaga oo dhoolla caddaynaya yaabbanna.
"Maanta haddaan kugu daayo a'daas aad beddeshay berri mid kalaa imaanaya oo beddelaya wax kale
markaana afkayagu wuu lumayaa qoraalkiisu marka sida ugu dhakhsaha badan u beddel, haddii
kale waa inoo maxkamaddee ha'illaawin".
Ula jeeddada aan ka leeyahay qoraalkani waa qaddarinta uu qof walbaa siiyo afkiisa iyo xaqa uu
ka mudanyahay. Ee haddaba su'aashu waa "Ma tahay qof qoraalka afkiisa qaddariya oo daryeela?".
"Ma tahay qof isku daya inuu Soomaali saxa qoro xataa hadduu lahjadda gobolkiisa ku qorayo?".
Mowduucii hore : Ha dhayalsan -||- Ka soo jeeda: -||- Qoraaga: Udige
Saxiixa : Udige
Cimri tagay ceeb laguma sagootiyo
Warqad gaara u dir Udige
Booqashada booska Udige la jantay
Raadi qoraalladuu qoray/qortay Udige
Jawaabta: Ha dhayalsan
Udige ku mahadsanid sheekadan haddana labo qof baannu haynaa ka mas'uula afka Soomaaliga sida loo qoro adiga iyi Samiira.
Waxaa la qoray : [ 16-03-2014 ]
Waa runtaa mudane wixii la dhayalsadaa dhibkeeday leedahay waa sheeko si qurux badan aad u qortaye ku mahadsanid.
Waxaa la qoray : [ 17-03-2014 ]
Waad ku mahadsantahay ka fikrad ahaan iyo wax tusidba. Waxaan sidaadoo kale rajaynayaa dhammaanteenba inaan sidaas oo kale u daryeelno afka. Adiguna dhab ahaantii horumar xad dheer leh baad samaysay dhanka qoraalka inshaa'allaah waa lagugu dayan.Mahadsanid akhi
carriga, cusubyahay, dalkan, degey, dhashay, dhawaanahan, furay, gala, goobtu, hanta, howl, ingiriiska, isagu, jare, jarista, jaruhu, macaamiishiisu, sheekadan, tima, timo, wiil, xanbaarsanahay, xirfadda, yaalla, yemen
Saacaddu hadda waa 12:38 AM.